आठौ तनहुँ महोत्सव; शान्तिश्री परियारको प्रस्तुतीमा झुमे दर्शकहरु – Damauli Online News
आठौ तनहुँ महोत्सव; शान्तिश्री परियारको प्रस्तुतीमा झुमे दर्शकहरु
१९ चैत्र २०७८, शनिबार १९:१०
दमौली : महोत्सवको दशौं दिन शनिबार गायिका शान्तिश्री परियारको प्रस्तुतीमा झुमे दर्शकहरु छ । शनिबार बिदाको दिन परेको र राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त कलाकार शान्तिश्री परियारको प्रस्तुतिका कारण पनि दर्शकहरुको भीड पनि बढेको थियो ।
गायिका परियारको करिब आधा दर्जन गीत प्रस्तुतिमा दर्शकहरुले स्वरमा स्वर मिलाउँदै नाचेर साथ दिएका थिए । त्यसैगरी,अर्का कलाकार हरि कर्माचार्यको प्रस्तुतिले पनि दर्शकहरुलाई भरपुर मनोरञ्जन प्रदान गरेको थियो ।महोत्सवमा ४० हजार दर्शकहरुले महोत्वसको अवलोकन गरेका छन् भने करिब ५० लाख बराबरको आर्थिक कारोबार भएको आयोजक समितिले जनाएको छ । महोत्सवमा दर्शकहरुको भीडले महोत्सवस्थल नै भरिभराउ देखिएको महोत्सवका प्रवक्ता ईमकुमार मल्लले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी,महोत्सवको नवौ दिन शुक्रबार छेवाङ्ग लामाको प्रस्तुती हेर्न युवायुवतीहरुको बाक्लो भीड लागेको थियो । कार्यक्रमको स्टेजमा आउँदै गर्दा कलाकार लामालाई दर्शकहरुले हुटिङ लगाएर स्वागत गरेका थिए । कलाकार लामाले आफ्नो प्रस्तुतीमा दर्शकहरुलाई जुरुक जुरुक नचाएर मनोरञ्जन प्रदान गरेका थिए । त्यसैगरी कलाकार बसन्त बिश्वकर्माको एकल प्रस्तुती र मधु थापासंगको दोहोरीले पनि दर्शकहरुलाई भरपुर मनोरञ्ज्न प्रदान गरेको राष्ट्रिय कलाकार समन्वय समितिका संयोजक कुमार मल्लले जानकारी दिए । महोत्सवमा राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त कलाकारको प्रस्तुति रहेका कारण शुक्रबार पनि दर्शकहरुको उल्लेखनीय भीड लागेको थियो । शनिबार साँझ लाइभ कन्र्सट हुने त्यसैगरी शनिबार साँझ लाइभ कन्र्सटको आयोजना गरिएको छ ।
साँझ ७ बजे देखि शुरु हुने
उक्त कन्र्सटमा सिर्जना खत्री,हाउडे मायाको बेजोड प्रस्तुती रहने छ । प्रवेशको लागि टिकट रु.दुई सय कायम गरिएको छ । मादीसेतीमा संञ्चालन गरिएको मोटर बोट दर्शकहरुको आर्कषण बनेको छ । रु. एक सय ५० शुल्कमा मोटरबोटमा चढेर सरर…. आनन्द लिन पाएपछि दर्शकहरु मख्ख छन् । त्यसैगरी महोत्सवस्थल घोडामा चढेर आनन्द लिनेको संख्या पनि कमि देखिदैन् । दमौली बजार आसपास घोडा चढ्ने मज्जा लिने युवायुवतीहरुको पनि उत्तिकै भीड लाग्ने गरेको छ । रमाइलो मेलामा पीङ खेल्ने दर्शकहरु खचाखच भीड लागेको छ भने व्यापारिक स्टलहरुमा पनि सामान किन्नेहरुको राम्रै भीड लागेको आयोजक समितिले जनाएको छ ।